Tag: google nyocha | Martech Zone
Anyị nwere mkparịta ụka siri ike na mmemme idu ndú mpaghara na ịnakọta nyocha site na azụmaahịa na ndị ahịa n'ịntanetị. Ọtụtụ n'ime mkparịta ụka ahụ gbara gburugburu nyocha a na-akwụ ụgwọ ma ọ bụ na-akwụghachi ndị ahịa ụgwọ maka nyocha. Abughi m onye ọka iwu, yabụ m ga-atụ aro ka ị gwa nke gị tupu ịge m ntị. My stance na nke a dị mfe… adịghị akwụ ụgwọ ma ọ bụ ụgwọ ọrụ reviews. You nwere ike ghara ikwenye na m, mana dịka ụlọ ọrụ ọchụchọ na-agbago usoro ụgha,
Mọnde, Febụwarị 29, 2016 Sọnde, Febụwarị 28, 2016 Douglas Karr
N'oge na-adịghị anya gara aga, anyị nwere mkparịta ụka mara mma na Daniel Lemin, onye edemede nke Manipu O kwuru mkpa ọ dị ijide nyocha iji nweta nyocha ọhụụ ma luso nyocha ọ bụla na-adịghị mma nke nwere ike ibilite site n'oge ụfọdụ. Enwere oge dị mma iji weghachite nyocha dị ukwuu karịa mgbe onye ahịa nwere afọ ojuju hapụrụ azụmahịa gị? Eleghị anya ọ bụghị - ya mere gịnị kpatara ya